Niverina tamin'ny asa aman-draharaha ny IMEX America
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Niverina tamin'ny asa aman-draharaha ny IMEX America
Miara-mandeha mivantana ny bikan'ny trano fandraisam-bahiny sy ny torolàlana fampirantiana amin'ity herinandro ity, ny ekipa IMEX dia mikasa ny hanao ny “Road to Mandalay” ho malama ho an'ny indostrian'ny hetsika manerantany.
IMEX America dia manokatra ity fararano ity ao amin'ny tranony vaovao Las Vegas any Mandalay Bay.
Las Vegas dia antenaina ho sahirana amin'ny volana Novambra, noho izany, ny ekipan'ny IMEX dia mamporisika ireo mpampiranty sy mpanatrika hamandrika ny efitranon'ny hotely atsy ho atsy.
Ity hetsika 2021 ity dia manamarika ny andiany faha-10 an'ny IMEX America, manome antony lehibe hankalazana ny indostrian'ny hetsika.
Tsy mbola nisy famantarana marimaritra iraisana noho ny fanambaràna tamin'ity herinandro ity momba ny fampirantiana voalohany hisoratra anarana ho an'ny IMEX America, izay hisokatra ao amin'ny tranony vaovao Las Vegas - Mandalay Bay - tamin'ny volana novambra.
Ny sehatra iraisam-pirenena momba ny fampirantiana dia efa voamarina ho Amerika IMEX, tanterahina ny 9 - 11 Novambra, mandrefy ny sehatra rehetra ao amin'ny indostria ary mampiditra ireo toerana itodiana toa an'i Arizona, Atlantic City, Boise, Asheville, Greater Birmingham, Los Cabos, Monaco, Omaha, Peru, San Antonio ary Savannah; miaraka amin'ireo orinasa anisan'izany ny Amadeus River Cruises, Carnival Cruises, Dorchester Collection, Iberostar Hotel & Resorts, Kerzner International, Loews Hotels, Montage ary Omni Hotels.
Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, dia nanazava hoe: "IMEX America, eo am-pony, toeram-pivarotana velona ka faly izahay fa vonona hampidina orinasa indray ireo mpampiranty aminay amin'ny hetsika ifanatrehana. Mahafinaritra tokoa ny mandray azy ireo hiverina! Fantatray fa mpamatsy sy mpividy maro no noana traikefa namboarina tamim-pitandremana, azo antoka ary azo antoka ary efa sahirana ny ekipanay mikasa ny fivezivezena, ny dia tonga, ny torolàlana momba ny fisoratana anarana ary maro hafa. ”
Miaraka amin'ny tanànan'ny Las Vegas dia antenaina fa ho sahirana amin'ny volana Novambra ny ekipa IMEX dia mamporisika ireo mpampiranty sy mpanatrika hamandrika ny efitranon'ny hotely atsy ho atsy. Amin'ny alàlan'ny fiarahamiasa ataon'ny IMEX miaraka amin'ny MGM Resorts dia misy isa maromaro sy fananana hita eny amin'ny tsipika misy efitrano manomboka amin'ny USD90 isan'alina.
Nanohy i Carina: "Misy zavatra tena mendrika miandry ary tsy afaka miandry ny fandraisana ireo vondrom-piarahamonina misy hetsika izahay hiverina any IMEX America. Noho ny toe-javatra iasanay rehetra dia nanomboka nanomana na dia aloha kokoa noho ny mahazatra aza izahay. Tsy ho ela dia hamoaka ny torolàlana momba ny fiarovana voalohany izahay ary, na dia hiova aza izany rehefa mandeha ny herinandro ary miova ny torohevitra ofisialy, dia mikasa ny hisokatra, hanao ny marina ary hifanaraka amin'ny seraseranay rehetra izahay ka tsy hisy tavela intsony ao misy fisalasalana. Ny seho mariky ny taona 2021 dia hanana endrika sy fahatsapana vaovao any Mandalay Bay Noho izany dia manomana fisehoan-javatra vaovao manaitaitra ihany koa izahay, izay hataonay manakaiky kokoa ny fampisehoana.
Ny volana Novambra koa dia manamarika ny andiany faha-10 an'ny IMEX America, manome ny indostrian'ny hetsika antony iray hafa hankalazana ny fiverenana amin'ny asa aman-draharaha.
Ny IMEX America dia atao ny 9 - 11 Novambra any Mandalay Bay any Las Vegas miaraka amin'ny Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI, amin'ny 08 Novambra. Hisoratra anarana ny zanabola Eto.
eTN dia mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery ho an'ny IMEX America.
Teknolojia tsy misy taratra: Delta Air Lines dia mampiditra fandoavam-bola tsy misy fifandraisana
Ny tolo-kevitra ICAO izay nohavaozina dia manohana ny famerenan'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina